अर्थमन्त्रीको फेरिएको बोली
नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभालाई भर्च्युअल सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत पुनरागमन भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल हुने दाबी दोहोर्‍याए । केही आर्थिक परिसूचक प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको उत्साह व्यक्त गरे जुन उनले जेठ ३२ गते सार्वजनिक लेखा समितिमा दिएको मन्तव्यको ठीक विपरीत देखिन्छ । के १५ दिनमै नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरागमन भएकै हो त ?
अर्थमन्त्रीले लकडाउन हटेपछि आर्थिक गतिविधि निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गरेका छन् । लकडाउनका बेला २० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हुने गरे पनि अहिले ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू जति संख्यामा फर्कने अनुमान गरिएको थियो त्यसको दाँजोमा निकै कम फर्किएका छन् । जेठ महिनामा मात्रै १ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा राम्रो हो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता निकै सहज भएको र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
विप्रेषण वृद्धि, राजस्व उठ्ती र बाह्य व्यापारमा केही सुधार आउँदैमा आर्थिक क्षेत्र ८० प्रतिशत पुनरागमन भएको मान्न सकिने आधार देखिँदैन ।
अर्थमन्त्रीका यी भनाइले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिन्छ । यद्यपि विप्रेषण बढेकोबाहेक अन्य क्षेत्रमा उनले दाबी गरेजस्तो उत्साहित हुनुपर्ने विषय देखिन्न । लकडाउनका बेला औषधि र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमात्रै आयात गर्न सकिएकाले बाह्य व्यापार २० प्रतिशतमात्रै भएको देखिएको हो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै विभिन्न ठाउँमा अड्किएका सामान आउन थालेकाले आयातको ग्राफ बढेको देखिएको हो । जेठमा विप्रेषण बढ्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कमाइ बढ्नु कारण देखिन्न । अर्थतन्त्रमा आएको सामान्य सुधारबाट अर्थमन्त्री उत्साहित हुनु राम्रै होला, उनको भाषणबाट निजी क्षेत्र पनि केही उत्साहित होला, तर मुलुकका नीति र कार्यशैलीले भने यस्तो उत्साह जगाइराख्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारले नै प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई विदेश जानु नपर्ने अवस्था सृजना गरिने बारम्बार बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही विषय छ । तर, अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला अर्थमन्त्रीले भने युवाहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन् । यसले सरकारको दोधारे चरित्र पुष्टि गर्छ । अर्थात्, सरकारले सार्वजनिक रूपमा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भनी लिएको नीति देखावटी हो, ऊ वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चाहन्छ र अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण आश्रित नै बनाइरहन चाहन्छ ।
हो, विप्रेषण आय खराब मान्न सकिन्न । तर, कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई धेरै निर्भर बनाइँदा त्यस क्षेत्रमा समस्या आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ । नेपालका सन्दर्भमा विप्रेषण डच रोग बन्न सक्ने आशंका भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको भनाइले सरकारको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले भनेकै तथ्यांकलाई पत्याऊँ र १५ दिनमा नै अर्थतन्त्र मोडिएर सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको होला भन्ने मानौं । १५ दिन अघि संसदमा सरकारको दैनिक खर्च नै धान्न गाह्रो भएकाले विभिन्न कोषको रकम तान्नु परेको जवाफ दिने अर्थमन्त्रीले लकडाउन खुकुलो भएपछि अर्थतन्त्र केही सकारात्मक हुन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकेको भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि जवाफ दिएको केही दिन अघि नै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भइसकेको थियो । कतै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कोषको रकम तान्नकै लागि सरकारी खर्च धान्न गाह्रो भएको झुठो बयान दिएका त हैनन्, भन्ने आशंका उब्जिनु अन्यथा होइन ।
उद्योगीहरूले लकडाउन खुकुलो भएपछि उत्पादन शुरू गरे पनि बजारमा सामान नबिकेर समस्या छ । साना तथा मझौला व्यवसायी आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुँदैछन् । पर्यटन क्षेत्रका लाखौं व्यक्तिले आमदानी गुमाएका छन् । निजी विद्यालय, सार्वजनिक यातायात आदि क्षेत्रको रोजगारी संकटमा छ । उनीहरूले महिनौंदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । यस्तोमा विप्रेषण वृद्धि, राजस्व उठ्ती र बाह्य व्यापारमा केही सुधार आउ“दैमा आर्थिक क्षेत्र ८० प्रतिशत पुनरागमन भएको मान्न सकिने आधार देखिँदैन ।